Tag: Chiedza | Martech Zone
Chishanu, January 9, 2015 China, Gumiguru 29, 2020 Douglas Karr
Zvinotyisa asi vanhu vazhinji vanoshandisa yavo smartphone kuverenga email pane kunyatso fona (isa kutsvinya nezve kubatanidza pano). Kutenga kwevekare mamodheru modhi kwakadonha ne17% gore pamusoro pegore uye 180% vamwe vanhu vebhizimusi vari kushandisa yavo smartphone kuongorora, kusefa, uye kuverenga email kupfuura zvavakaita makore mashoma apfuura. Dambudziko, hazvo, nderekuti maemail application haana kufambira mberi nekukurumidza sezvakaita mabhurawuza ewebhu. Tichiri takanamatira
China, November 21, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tanga tichitarisa… er… kudanidzira nezverunhare rwekunonoka uye ndinotarisira kuti ticha tariswa. Kana iwe ukaita chinhu chimwe nhasi, chinofanirwa kunge chiri chekuyedza yako mameseji eemail auri kutumira kubva kune yako email mutengesi kuti uone kana vanhu vachigona kuaverenga. Sezvo isu patakagadzira epamoyo email matemplate eemail edu eiyo WordPress mhinduro, CircuPress, kuvaka inoteerera email template iyo yakadzora, yaiverengwa, uye ikashanda mhiri kwehuwandu hwe